बलात्कार रोक्न साझा अभियान |
बलात्कार रोक्न साझा अभियान
प्रकाशित मिति :2018-08-23 13:46:04
सार्वजनिक भएका तथ्याङ्कहरुले बलात्कारका घटना दिनदिनै बढिरहेको देखाउँछ । काखे बालिकादेखि ८० वर्ष पुुगेका वृद्धासम्म बलात्कृत भएका छन् । यस्तो अवस्थामा महिला कसरी जोगाउने ? चितवनका महिला तथा पुरुषहरुले सञ्जाल नै गठन गरेर यौन हिंसा रोक्न साझा अभियान थालेका छन् । उनीहरुले अभियान किन थाले ? अभियानकी संयोजक तथा अधिकारकर्मी मीना खरेलसँग महिला खबरले गरेको कुराकानीको संक्षेप ।
तपाईंहरुले थाल्नुभएको यौन हिंसा रोक्ने कस्तो अभियान हो ?
– नेपाल प्रहरीको तथ्यांक हेर्ने हो भने हरेक वर्ष बलात्कारका घटना बढ्दैछन् । चितवनमै ८४ वर्षकी आमा र ४ वर्षकी बच्ची बलात्कृत भएर अदालतमा मुद्दा चलेका घटना छन् । डरलाग्दो रुपमा बलात्कार बढेको छ । यसको न्यूनिकरणको लागि भनेर नारायणगढको सामुदायिक सेवा केन्द्रले हस्ताक्षर अभियान संकलन गरेको थियो । एक महिनासम्मको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेपछि हामीलाई बलात्कार विरुद्धको आवाज एक जना वा संस्थाले मात्रै उठाएर सम्भव हुँदैन भन्ने लाग्यो । त्यसैले मेरै अगुवाईमा बलात्कार विरुद्धको साझा अभियानका लागि पहल गरियो । विशेष गरी यो अभियान बलात्कार लगायत यौन हिंसा न्यूनिकरणका लागि थालिएको साझा अभियान हो । यसमा चितवनका २५ बढी संस्थाको सहभागिता छ । भने व्यक्तिगत रुपमा पनि अभियन्ताहरु सहभागी हुनुहुन्छ ।
याैन हिंसा विरुद्धकाे अभियानबारे जानकारी दिन गरिएकाे पत्रकार सम्मेलनमा बाेल्दै मीना खरेल ।
अभियान अन्तरगत के के कार्यक्रम हुन्छ ?
– हामीले यो अभियान हिजो बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सुरु गरेका छौं । भोली शुक्रबार दबाबमुलक र्याली निकाल्दै छौं । प्लेकार्ड तथा ब्यानरसहित शान्तिपूर्ण दबाब र्याली निकाल्छौं । अनि यसअघि संकलित बलात्कार विरुद्धको हस्ताक्षर भरतपुर महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा पठाउँछौं । त्यसपछि जिल्लाबाट प्रदेश, संघ र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग बलात्कार विरुद्ध कडा कानून बनाउन छलफल गर्छौं । अनि जिल्लाका विद्यालयहरुमा सामाजिक शिक्षा पढाउने शिक्षकमार्फत विद्यार्थीहरुलाई यौन हिंसाबारे जानकारी गराउँछौं । यति मात्रै होइन जिल्लाका बलात्कारका उजुरी सुन्ने प्रहरी अदालतमा सहायता कक्ष पनि स्थापन गर्ने कार्यक्रम हाम्रो अभियान अन्तर्गत छ ।
यौन हिंसा तथा बलात्कार घटाउन यो अभियानले कसरी सहयोग पुर्याउँछ ?
– यो अभियान सभ्य तरिकाले दबाबको लागि थालिएको हो । यसअघि यौन हिंसा, बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा कुनै विचार, पक्षको भएकै आधारमा अपराधीले उन्मुक्ति पाएका घटना पनि छन् । त्यसैले यो अभियानमा राजनीतिक रुपमा फरक आस्था भएका, फरक पक्षका व्यक्तिहरु सहभागी हुनुहुन्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा त उहाँहरुको ऐक्यवद्धता नै हो । सबै मिलेर कम्तिमा पनि अपराधीलाई संरक्षण नहुने वातावरण भयो भने पनि हाम्रो अभियान सफल भएको मान्नुपर्छ । हामीले जनचेतनाको अभियान तथा सांसदहरुसँग पनि अन्तरक्रिया गर्दै छौं । त्यसैले उहाँहरु मार्फत कानून कडा ल्याउन र भएका कानूनको कार्यान्वयनमा पनि प्रभावकारिता आउँछ । त्यहि नै हाम्रो अभियानको प्रभावकारिता हो ।
यौन हिंसा रोक्ने यो अभियानमा पुरुषहरुलाई चाँही समेट्नुभएको छैन ?
– बलात्कृत महिलाको बाबु पुरुष नै हो । दाजु पुरुष हो । यद्यपि महिला बलात्कृत पनि पुरुषबाटै हुन्छन् । त्यसैले आफ्ना छोरी, आमा, श्रीमती, दिदीबहिनी बलात्कृत हुँदा अर्को पुरुषलाई पीडा झनै बढी हुन्छ । बलात्कारी अपराधी हो । यो जघन्य अपराध विरुद्ध चितवनका पुरुष पनि उत्तिकै सशक्त हुनुहुन्छ । यो अभियानमा हामीसँग पुरुष प्रमुख रहनुभएका अधिकांश संस्था आवद्ध हुनुहुन्छ । व्यक्तिगत रुपमा पनि पुरुषहरु संलग्न हुनुहुन्छ ।
अहिले बलात्कारीलाई फाँसीको माग जोडतोडले उठिरहेको छ । तपाईंहरुको दबाब कार्यक्रममा यो माग हुन्छ कि हुँदैन ?
– मैले लगातार काम गर्दाको बलात्कृतको अवस्था, बलात्कारको प्रकृति हेर्दा त बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्डको विकल्प देख्दिन । तर यो अभियान मेरो मात्रै होइन । धेरै अभियन्ताहरु सहभागी हुनुहुन्छ । उहाँहरुसँग सल्लाह गरेर उहाँहरु पनि सहमत हुनुभयो भने हामी यो माग पनि राख्छौं । नभए पनि बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद त हाम्रो माग छँदैछ ।